Sikufundisa ukuba ungabhalisi njani kwiApple Music | IPhone iindaba
I-Apple Music yeza kwi-iOS ngoJuni 30, 2015, ithembisa ukusizisela owona mculo ubalaseleyo ngexabiso elifanelekileyo. Njengoko uyazi, ngesandla seApple Music basinike isicwangciso sabo seenyanga ezintathu sokulinga, ke ngoko kangangeenyanga ezintathu singazonwabela zonke izibonelelo zobulungu boMculo weApple, nangona kunjalo, ukonwabela oko kubhaliswa kufuneka siqinisekise idatha yebhanki yethu iiakhawunti kwaye ke, yamkela ukuba nje ukuba olu vavanyo lwasimahla lugqityiwe, isixa esihambelanayo siyakubizwa kwiakhawunti yethu yebhanki. Kodwa kusenokwenzeka ukuba uApple Music akakuqinisekisanga, okanye awufuni kuhlawulela inkonzo, ngenxa yayo, Ungarhoxisa ngokulula ubhaliso lwe-Apple Music Ngesixhobo sakho se-iOS okanye kwi-Mac yakho kwi-iTunes, kwi-Actualiad iPhone sikubonisa ukuba kanjani.
1 Izicwangciso zokuhlawulwa kwe-Apple Music
2 Rhoxisa umrhumo kwi-iOS
3 Khubaza kwi-iTunes kwi-Mac OS
Izicwangciso zokuhlawulwa kwe-Apple Music
Kwimeko apho usazibuza ukuba uyayithenga okanye ayiyithengi, siyakukhumbuza ukuba zeziphi izicwangciso zokuhlawula umculo ze-Apple, kuxhomekeke ekubeni yiakhawunti eyedwa okanye yosapho.
Iakhawunti yomntu ngamnye: Yonke umculo kwisixhobo esinye, € 9,99 ngenyanga.
Iakhawunti yosapho: Yonke umculo ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-6 ezahlukeneyo kwiqela elinye "Kusapho", € 14,99 ngenyanga.
Rhoxisa umrhumo kwi-iOS
Ukucima umrhumo we-Apple Music kwisicelo esinye soMculo kwi-iOS okanye kwicandelo leVenkile yeTunes yezicwangciso kulula kakhulu, Kwiindaba ze-iPhone sichaza ukuba:
Sivula usetyenziso lomculo kwaye ucofe uphawu lomsebenzisi kwikona ephezulu ngasekhohlo ukufaka iprofayili kunye noseto lwayo.
Cofa kumayeza «jonga i-ID ye-Apple », imenyu entsha iya kuvula kwaye kwicandelo Imirhumo sicofa kwakhona kukhetho olubizwa ngokuba luhlaza okwesibhakabhaka Lawula.
Iya kusibonisa uhlobo lobhaliso esinalo, kunye nomhla walo wokuphela kunye nokuqala kwentlawulo. Apha ngezantsi kukho imo yokuzihlaziya esizenzele yona.
Siphelisa ukusebenza kotshintsho olubonakalayo kwaye inkonzo iya kurhoxiswa, kulula oko.
Khubaza kwi-iTunes kwi-Mac OS
Sinqakraza kwi log kwaye ufake idatha yethu.
Kumsebenzi wokugqibela obiziweyo Ulwazi lweAkhawunti, sicofa kwakhona.
Sihambela kwicandelo le Useto nakwicandelo Imirhumo, sicinezela kulawulo.
Ngoku ngoku nqakraza kwi Hayi ithi phi "ukuvuselelwa okuzenzekelayo«.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Ityala leenyanga ezintathu le-Apple Music liphelile, ungarhoxisa njani umrhumo wakho
Ndikhangela abantu aba-5 abanzulu ukuba babe nomculo weapile yosapho kwaye ingangama- € 2,50 ngenyanga nganye. Ndiyifumene le
Molo Daniyeli, ndinomdla.
Andazi ukuba yimpazamo okanye into ... kodwa ndiyifumene into yokubhalisela simahla ... (Khange ndiyisebenzise) kungenzeka ukuba ndinenkonzo yasimahla ngaphandle kokuyivula ...?